(Dhegeyso)-Roobab biyo galiyey baraagaha oo ka da,ay deegaano ka tirsan Nugaal iyo Mudug | Puntland
(Dhegeyso)-Roobab biyo galiyey baraagaha oo ka da,ay deegaano ka tirsan Nugaal iyo Mudug
Roobab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyadu ayaa galabtay ka da,ay deegaanada Warguduud oo hoostaga degmada godob jiraan ee gobalka Nugaal iyo Dhoobo Cantuug oo iyana hoostagta degmada Jariiban ee Gobalka Mudug.
Roobka oo ahaa mid xoogan ayaa biyo galiyey qaar kamid ah Barkadaha iyadoo ay galeen 2 ilaa 3 salaan sidookale waxaa uu biyo dhigay qaar kamid ah Balida deegaanka sida uu noo sheegeen dadka deegaanku.
Maxamed Cabdinuur Xayir oo kamid ah dadka deegaanka kuna sugan deegaanka Dhoobo Cantuug ayaa noo sheegay in deegaanada uu roobku ka curtay ay ka jirtay abaar aad u daran oo haysay dadka iyo deegaanka.
Maxamed ayaa dhankale ka waramay biriq roobaad la sheegay inay ku dhacday qoys daganaa deegaanka Dhoobo Cantuug waxaa uu sheegay in gabar uu dhaawac fudud ka soo gaaray balse qoyska inta kale ay bad qabaan.
Roobkaan ka da,ay deegaanadaas ayaa kusoo aadaya xili abaar aad u kulul ay ka jirto deegaanada Puntland iyadoona qaylo dhaan ay ka soo yeerayso dadka xoola dhaqatada iyo reer miyiga ku sugan Puntland.